युरिया अभावमा निर्लज्ज सरकारः बंगलादेशले कहिले दिन्छ ? किसानले कहिले पाउँछन् ?
काठमाडौं । यस वर्ष मुलुकमा ९८ प्रतिशत खेतमा समयमै रोपाइँ सम्पन्न भएर कीर्तिमान कायम भएको छ । मौसमको अनुकुलताका कारण सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पनि समयमै रोपाइँ सम्भव हुन सक्यो
ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट कृषिमुखी, १० वटा वडामा कृषि पकेट क्षेत्र
ललितपुर । काठमाडौं महानगरपालिकासहित राजधानीका अन्य नगरपालिकामा सहरी क्षेत्र व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला राजधानीभित्रकै दोस्रो महानगर ललितपुरको ध्यान भने कृषि उत्पादनतर्फ देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८
घनश्याम भुसालमाथि नैतिक संकटः राजीनामा दिने कि आत्मसमर्पण गर्ने ?
काठमाडौं । बजेटपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाहेक सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट मन्त्रीहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्– कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल । हुन त
कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट, दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भरको लक्ष्य
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न चुनौती र अवसरको उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने । दुग्ध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिने जनाइएको
कृषिमन्त्रीलाई बतासको सुझावः नो ट्रेड यूनियन, आयकर छुट, कृषि पर्यटन र गाँजा खेती
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले संस्थागत सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, निजी क्षेत्रबाट कुने विषयगत क्षेत्रका लागि वस्तुगत सुझाव
रामचन्द्र पौडेल भन्छन्ः अर्थतन्त्र उकास्न कृषिको विस्तार गरौं !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि मात्र उत्तम विकल्प भएको बताएका छन् । नेता पौडेलले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञहरुसँग गरेको